केन्या सफारी यात्रा गाइड: भारतबाट लक्जरी मसाई मारा सफारी कसरी योजना बनाउने
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » गेस्टपोस्ट » केन्या सफारी यात्रा गाइड: भारतबाट लक्जरी मसाई मारा सफारी कसरी योजना बनाउने
अप्रिल 30, 2021
केन्या सफारी योजना बनाउँदा केहि सम्झनको लागि चीजहरू विचार गर्न केहि राम्रा गतिविधिहरू सहित, एक मेगा लक्जरी भ्रमण, र भारतबाट मासाई मारा शून्य झन्झटको साथ यात्रा गर्दै।
A केन्या सफारी केवल छुट्टी मात्र होईन। यो ओडिसी हो। अज्ञातमा यात्रा। र यही कारणले यो यति रमाइलो हुन्छ!
मसाई माराको मुटुमा, बिहानको चिसोमा तातो-एयरको बेलुनमा यात्रा गर्ने हप्सको रूपमा, तपाईं क्रिष्ट अफ्रिकी हावा महसुस गर्न सक्नुहुन्न, अफ्रिकन साभनाह नाटकको साथ गर्भवती छ जुन खुला हुन लागेको छ। बिस्तारै, बेलुन अप बग्छ, विशाल मासै मारा माथि होभरिंग।
चारै तिर फैलिएको घाँस मैदानहरू बिस्तारै अँध्यारोको अन्तिम भागहरू देखिन्छन् जुन एक शानदार सूर्योदयको आशाजनक न्यानोपनलाई अँगाल्न सक्छन्।
बिहानको सूर्यको मोहक किरणहरूले भूमिलाई चुम्बन गर्दै जनावरको राज्यलाई जीवन्त पार्ने क्रम बिस्तारै विस्तारै आकाशले सुनौला अम्बर रuesहरू बनायो। यो एक प्रकाश हो।
तपाईं नजिकै जिराफहरूको धरहरा देख्नुहुन्छ, केहि रूखका पातहरूमा निबिलिंग वरिपरि शाशिएर;
त्यहाँ चपल Dik-Dks को एक जोडी को बारे मा playfully ड्याशिंग, बिहानी ऊर्जा को पूर्ण संग। दोस्रो विभाजनका लागि, तपाई आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ कि ती डिक-डिक्स के उच्च छन्।
उत्तरमा भनेजस्तो, एक उग्र गैंडा पीडाले गिर्खाइन्छ जब उनी अगाडि बढ्छन्, उनको टाउको तल राखिएको छ, बिहानको सर्कसबाट अप्रभावित।
यी धेरै जसो खेलाडीहरूका लागि अज्ञात, सिंहहरूको गर्व चुपचाप टाढा टाढा रहन्छ, सतर्क आँखाहरू डिक-डिक्समा स्थिर छन्, निस्सन्देह तिनीहरूको परिवारको बिहानको खाजाको योजना बनाउँदैछ।
केन्याको मासाई मारा लक्जरी भ्रमण तपाईंको लागि मात्र, शेर राजाको फिल्मको वास्तविक जीवन संस्करणको रूपमा महसुस गर्नुहोस्, प्याभिलियन सिट सहित वन्यजीव थियेटरमा प्रिमियम सीजन टिकट।
यस मार्गनिर्देशनमा, बाट विज्ञहरू MasaiMarasafari.in भारतबाट लक्जरी मासाई मारा सफारीको योजना कसरी बनाउने बारे सुझावहरू साझेदारी गर्नुहोस् र तपाईंको धेरैजसो कार्यशाला बनाउनुहोस्।
भारतबाट लक्जरी मसाई मारा सफारी योजना गर्दै.
निर्णय-निर्णय सफलको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो मसाई मारा लक्जरी भ्रमण। मेरो मतलब, कुन ट्राभल एजेन्ट तपाईं जाँदै हुनुहुन्छ तपाईको सफारी बुक गर्नुहोस् संग? तपाई कति दिन मसाई मारामा हुनुहुन्छ? तपाईं कहाँ बस्नुहुनेछ र यसको कति खर्च हुन्छ? निम्न महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू छन् जुन तपाइँले विचार गर्न आवश्यक छ।
एक यात्रा / टूर एजेन्ट छनौट।
एक मा केन्यान सफारी, टुर एजेन्टहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।
यी केटाहरू हुन् जसले तपाईंलाई तपाईंको यात्रा कार्यक्रमको योजना बनाउन, भ्रमणहरू अनुसूची गर्न, तपाईंको आवास, घरेलू उडानहरू व्यवस्थित गर्न, भ्रमण मार्गनिर्देशनहरू प्रदान गर्न, र केन्यामा सफल सफारीको लागि तपाईंलाई चाहिने सबै कुराको हेरचाह गर्न सहयोग पुर्‍याउँछन्।
एक भरपर्दो टूर कम्पनी हो, त्यसैले कुनै पनि मा एक मुख्य मासै मारा सफारी.
तर टुर एजेन्टहरूको समुद्री बाहिर, तपाईं कसरी थाहा पाउनुहुन्छ जुन तपाईंको लागि उचित फिट हुनेछ?
सर्वप्रथम, व्यावसायिक टुर एजेन्टहरू विधिवत इजाजतपत्र प्राप्त हुन्छन्, दर्ता हुन्छन्, र आधिकारिक कार्यालयहरू र वेबसाइटहरू हुन्छन्।
एउटा टूर कम्पनीले आफ्नो वाचा पूरा गर्न सक्छ कि छैन भनेर जान्ने एक निफ्टी तरीका भनेको उनीहरूको विगतका ग्राहक समीक्षा र प्रशंसापत्रहरू हेरेर हो।
एक भन्दा बढी डिजिटल प्लेटफर्ममा राम्रो प्रयोगकर्ता रेटिंगले तिनीहरूको व्यापारमा निपुण छ कि एक संगठन प्रकट गर्दछ, तपाईंको सफारी राम्रो हातमा हुनेछ भन्ने अर्थ।
साथै, राम्रोसँग सम्भार गरिएको सवारी साधनहरूको साथ टूर कम्पनीहरूका लागि पनि हेर्नुहोस्। भरपर्दो यातायातको मतलब खुशीको बुश सफारी बीचको भिन्नता र जंगलीमा फसेको हुन सक्छ।
चित्र Aआजकन्यासाफर केन्याको भरपर्दो टूर अपरेटरहरू मध्ये एक हो।
आदर्श रूपमा, यो मासै मारा टूर कम्पनीले तपाईले रोज्नु भएको देशी गाईडहरू पनि हुनुपर्दछ जो कहिले र जान्दछन् जहाँ कार्य पत्ता लगाउने.
नेटिभ गाईडहरूले स्थानीय समुदायलाई बुझ्न सजिलो बनाउँदछ जस्तै मासाई र सम्बुरु।
यी केहि चाखलाग्दो व्यक्तिहरू हुन् तपाई पक्कै एको बखतमा भेट्नुहुनेछ केन्यामा सफारी।
व्यावसायिक यात्रा एजेन्टहरू तपाईंको यात्रा योजना बनाउँदा विशेष रूपमा अपरिहार्य हुन्छन्। नक्कली एजेन्टहरूलाई बिगार्न थप तरीका भनेको तिनीहरूको यात्रा र मूल्य निर्धारणको तुलना गरेर हो।
अविश्वसनीय रूपले कम मूल्यहरू निश्चित रातो झण्डा हो र संकेत गर्दछ कि एजेन्टले उनीहरूको डेलिभरी क्षमता भन्दा बढि प्रोमिसन गरिरहेको हुन सक्छ।
तातो सल्लाह: उत्तम टूर एजेन्टले तपाईंलाई मासाइ मारामा लगफो लक्जरी टुरहरू प्रस्ताव गर्दछ। यहाँ, तपाइँ पाउनुहुन्छ अनुसार तपाईंको सफारी यात्रा कार्यक्रम दर्जी गर्नुहोस् तपाईंको बजेट र प्राथमिकताहरू।
गन्तव्य र गतिविधिहरूमा तपाइँको अनुसन्धान सञ्चालन गर्न नडराउनुहोस् जब तपाईं व्यस्त रहन चाहानुहुन्छ मसाई मारा सफारी।
त्यहाँ सायद कहिल्यै एक सुस्त क्षण छ मासाई माराको यात्रा। त्यो अधिक हो यदि तपाईं एक मा हुनुहुन्छ भने मासाई मारा लक्जरी भ्रमण, किनकि यसले तपाईंलाई माराले प्रस्ताव गरेको सबै कुरामा बेलगाम पहुँच दिन्छ।
यस गतिविधिमा हाइलाइट गर्ने मुख्य गतिविधिहरू कुनै पनि हिसाबले पूर्ण छैनन्। तपाइँको तालिकामा निर्भर गर्दै धेरै थप प्रशंसनीय गतिविधिहरू उपलब्ध छन्।
हट-एयर बेलुन राइडहरू
मासाई मारामा तपाइँको दिन सुरू गर्नका लागि एक प्रीमियमको रमाईलो तरिकाहरू मध्ये एक शान्त तातो-एयर बेलुनको सवारीमा जाँदा हो।
कोमल हावा जस्तो, मारा सावनका माथि बग्नुहोस् र एक हवाई दृश्यको आनन्द उठाउनुहोस् तपाईं र पृथ्वीमा वन्यजीवहरूको बीचमा केहि मिटरहरूको साथ। यहाँ, तपाईं यो सबै हेर्न पाउनुहुन्छ।
चित्र HHot एयर बेलुन र मारा मा Zebras हर्ड
याद गर्नुहोस्, मारा ठूला पाँच (सिंह, भैफलो, हात्ती, गैंडा, र चितुवा) को घर हो र विश्वमा सिकारीहरूको सघन जनसंख्या छ।
वाइल्डबीस्टको वार्षिक बसाई प्रवासको क्रममा लारा, चीता, गोही र अन्य सिकारीहरू पर्खालमा मारा नदी तर्फ धेरै विल्डेबेस्टको भगदड देख्छन्।
दिनको समयमा, तपाईं केन्याको वन्यजन्तुहरूको चालित खेल ड्राइभहरू र हिंड्ने सफारीहरू मार्फत अझ फुर्सतका साथ जान सक्नुहुनेछ।
यसले तपाईंलाई मासाई मारामा तपाईंको सफारीको मजा फरक पार्नेछ, किनकि तिनीहरूले जनावरहरूसँग अधिक घनिष्ठ भेट प्रदान गर्दछन्।
तपाईले जनावरहरूको सानो प्रजातिहरू नजिकै देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै ब्याट एअर्ड फक्स, काराकल, मुंगोज, वारथोग्स, बाँदर र बाबुनहरू।
वन्यजीव र मारा मानिसहरूमा माराको मुटुको धडकन झल्किन्छ। मासाई माराका आदिवासी हुन् र उनीहरूको जनावरहरू जत्तिकै धनी सम्पदा छ।
कुनै पनि लक्जरी भ्रमणमा मासाई मारामा, मासाई गाउँको भ्रमण आवश्यक छ। तपाइँको यात्रा कार्यक्रममा समावेश गर्नाले तपाइँलाई यी रंगीन मानिसहरूसँग प्रत्यक्ष सामना गर्न दुर्लभ अवसर प्रदान गर्दछ।
तातो सल्लाह: मासाई माराको मुटुमा बस्ने ठाउँहरूको लागि छनौट गर्नुहोस्, प्राथमिक रूपमा पशुको पानी स्रोतहरू (टेलक र मारा नदीहरू) नजिक। यसले तपाइँको डेराको आरामबाट पनि वन्यजन्तुहरूको अधिक मात्रामा हेर्न सक्षम गर्दछ।
चित्र E.हिलहरू तिर्खा मेट्छन्
तपाईंको मासाई मारा सफारी बुकिंग गर्दै।
अब तपाईंले आफ्नो टुर एजेन्ट र तपाईंको मनपर्ने गतिविधिहरू पहिचान गर्नुभयो, यो तपाईंको यात्रा बुक गर्ने समय हो।
टुर अपरेटरलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र उनीहरूको टुर प्याकेजहरूका बारे कुनै प्रश्न सोध्नुहोस्। यो जानकारी तपाईंको निर्णय प्रक्रियामा अमूल्य साबित हुनेछ।
उदाहरणका लागि, नियमित मासाई मारा सफारीको लागि उनीहरूको औसत मूल्य के हो? जब मासाई माराको लागि लक्जरी यात्रा छ त्यसको मूल्य केहि फरक छ?
भेट्नको लागि उपयुक्त समय के हो? तपाईले कुन कुराको आशा गर्नुपर्दछ जुन सालको विभिन्न समयमा देख्नुपर्दछ?
साथै, प्राय जसो टूर कम्पनीहरूसँग प्रि-सेट आईटमहरू हुन्छन् जुन समावेश गरिएको छ वा उनीहरूको यात्राहरूबाट हटाइएको छ।
के समावेश छ वा खास यात्राबाट बाहिर राखिएको बारे सोधपुछ गर्न नबिर्सनुहोस्।
यो गलतफहमी वा अन्यथा कभर छन् चीजहरूमा अनावश्यक खर्च जोगिन मद्दत गर्दछ।
यस एक्सचेन्जको बखत, यात्राको प्रकारले पनि फरक पार्छ। उदाहरण को लागी, तिनीहरू परिवार सफारी गर्छन्? व्यापार सफारी? एकल भ्रमण आदि
एक पटक तपाईले आदर्श मासाई मारा सफारीको बारेमा निर्णय लिइसक्नु भएपछि, यात्रा कार्यक्रमको एक प्रतिलिपि र कम्पनीको यात्रा उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस्।
अधिकांश प्रतिष्ठित कम्पनीहरूहरू जस्तै अजिकेन्यासाफिरस.कट खुशीया तपाईका लागि यस्को गणना गर्ने छ।
तातो सल्लाह: मासाई माराको लागि तपाईंको यात्रा बुकि। गर्दा, तपाईंले एउटा भ्रमण अन्तर्गत दुई प्रकारका सफारीहरू मिलाउने विचार गर्न सक्नुहुन्छ। एक पटक व्यापार सफ्टरी एक रोमान्टिक सफारीको रूपमा दोब्बर हुन सक्छ एक पटक तपाईं व्यापार बैठक संग पूरा गरेपछि! एक पटकको यात्राको लागि आनन्दलाई दोब्बर बनाउनुहोस्।
के प्याक गर्ने।
सबै रसदहरू हेरचाहको साथ, यो टेक-अफको लागि तयारी गर्ने समय हो।
तपाइँको लामो-प्रतीक्षित सफारीको लागि तयार हुँदा, के पछाडि छोड्ने भनेर जान्नु भनेको के प्याक गर्ने भनेर जान्नु जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
केन्या एक उष्णकटिबंधीय देश हो जुन प्राय: वर्षको लागि मध्यम तातो मौसमको साथ हुन्छ। यो उत्तम हुनेछ यदि तपाईले प्याक गर्ने बेला हल्का लुगाहरू छनौट गर्नुभयो भने।
साथै, किनकि तपाईं झाडी सफारीको लागि अग्रसर हुनुहुन्छ, तन र हरियो रंगको कपडामा जानु उत्तम हो किनभने यी गाढा रातो भन्दा जनावरहरूलाई कम खतरा हुन्छ।
ट्यान कपडाले तपाईंलाई प्राकृतिक वातावरणसँग मिसाउन मद्दत गर्दछ र जनावरहरूलाई भाग्ने सम्भावना कम हुन्छ।
समावेश गर्न अन्य महत्वपूर्ण कुराहरु भनेको लामखुट्टे भगाउने क्रीम, सूर्य टोपी, दूरबीन, आरामदायी खेल जुत्ता वा पैदल यात्रा जुत्ता, र एक चिसो साँझ को लागी एक न्यानो जैकेट वा दुई हुन्।
तातो सल्लाह: केन्याई सरकार सबै इनबाउन्ड यात्रुहरूलाई पहेलो ज्वरो सर्टिफिकेट र COVID-19 मेडिकल क्लियरन्स हुन आवश्यक छ। तपाईंको उडानहरू बुकिंग गर्नु अघि यस महत्त्वपूर्ण प्रमाणीकरणको लागि तपाईंको चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।